राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशलाई भड्खालोमा हालेः रामचन्द्र पौडेल spacekhabar
मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद बिघटनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसद बिघटन गर्ने यो घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसबाट संविधानमाथि खेलवाड भएको छ। लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धी समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो।
मध्याबधि चुनाबको घोषणा गरिएको छ ? कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैबाट जालसाजी भएको छ। नेपाली जनताको भाग्य र भबिश्यमाथि खेलवाड गरिएको छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले जनताबीचमा जानबाट कहिल्यै भाग्दैन। यति भनिरहदा चुनाबको घोषणा असल नियतबाट गरिएकै होइन।
कांग्रेसको अबको रणनीति के त ?
संसदीय दलले संघर्ष गर्नुपर्छ। कानुनी लडाई लड्नुपर्छ। संविधान, मुलुक र जनताका भबिश्य जोगाउन लाग्नुपर्छ। यो कांग्रेसको दायित्व हो।
चुनाब हुन्छ त ?
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि मैले कुरा गरेको छु। कोरोनाबाट जनता आक्रान्त छन्। आयोगका सदस्यहरु कोरोना महामारीका बीच मतदाता नामावली संकलन जाने अबस्था छैन भनिरहेका छन्। अन्य परिस्थिति पनि चुनाब अनुकुल छैन। देशलाई आपत्तिमा धकेल्ने काम भएको छ। यसप्रति सबै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
राष्ट्रपतिले किन दुबैको दाबी पुगेन भनेकी होलिन्?
शुक्रबार २ बजेसम्म ओलीको बहुमत छैन भनिएको थियो। अनि ३ बजे कताबाट बहुमत आयो र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे? त्यसमा तुलना गरेर भण्डारीले कसरी शेरबहादुर देउवाको दाबी रिजेक्ट गरिन्? यदि राष्ट्रपति देश र जनताप्रति इमाान्दार भइदिएको भए प्रतिपक्षी नेताले संहाल्छु भनेर झण्डै राष्टिय सहमतिका साथ अन्य दल आएको बेला सहमत गर्नुपथ्र्यो नि।
देउवाले बुझाएको हस्ताक्षर किर्ते भनिएको छ नि ?
होइन, सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा दिएका हुन् । १५९ हस्ताक्षर गरेर पेश गरिएको थियो। प्रमले हचुवाका भरमा बिबरण बुझाएका छन्। जहाँ कसैको हस्ताक्षर पनि थिएन। त्यो दाबीलाई तेस्र्याएर चुनाबमा लैजाने षड्यन्त्र घातक छ। दुबै मिलेर जालसाजी गर्ने काम भएको छ। मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने काम भयो।
अब के गर्ने त कांग्रेसलगायतको बिपक्षी मोर्चाले?
सबै फ्रन्टको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सभापतिले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कानुनी लडाई पनि लड्नुपर्छ। सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने अबस्था छैन। संविधान, लोकतन्त्र र परबर्तन जोगाउन हरतरहले नेतृवत्वका लागि कांग्रेस अघि सर्नुपर्छ।
निर्वाचन त अबसर होइन र अहिलेको अबस्थामा कांग्रेसका लागि?
मूल कुरा निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। संविधान फाल्न संसद भंग गरिएको हो। यो सरकारले संविधानमाथि बारम्बार हमला गरेको छ। यो कदम चुनाब गराउन होइन, संविधान फाल्नका लागि गरिएको खेल हो। यसप्रति कांग्रेस बढी नै सतर्क हुनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०६:४५:००
घर भत्काउँदिन, ट्राफिक व्यबस्थापन गर्छु
विमलेन्द्र निधि नयाँ पुस्ताको सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ: मनमोहन भट्टराई